कोरोनाले विस्थापित बस्तीमा परेको प्रभाव - CSRC Nepal
कोरोनाले विस्थापित बस्तीमा परेको प्रभाव
हामी यतिबेला कोरोनो भाइरस (कोभिड–१९) कोे सङ्क्रमण फैलनबाट बच्न र बचाउनको लागि लकडाउनमा छौं । घरमै बसेर, भौतिक दूरी कायम गरेर मात्र कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने भनाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि छ । सोहीअनुसार आज लगभग विश्व समुदाय घरभित्रै सिमित हुनु परेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोभिड–१९ ले विश्वको २१३ देशलाई प्रभावित गरिसकेको छ । यो भाइरस गत जनवरी महिनामा चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको थियो । यत्ति छोटो समयमै यसले संसारलाई प्रभावित ग¥यो । यसर्थ यसले महामारीको रुप लिएको छ । यसले २ लाख भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने करिव ३० लाख मानिसहरूलाई स्रक्रमित गरेको छ । यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
कोभिड–१९ को कारण नेपालमा बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ भएको गत चैत ११ गतेदेखि हो । लगातार ४ पटकसम्म लकडाउनको समयवधि सरकारले थप गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले आगामी वैशाख २५ गतेसम्मको लागि लकडाउनको समय थपेको छ । थाहा छैन, अझै कति दिन नेपालीहरूले लकडाउनको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लकडाउनले यतिबेला विभिन्न कारणले विस्थापित भई बसोबास गर्ने परिवारलाई बढी समस्यामा परेको छ । उसै त समस्यामा रहेका परिवार झन् अर्काे महामारी थपिएपछि स्वभाविक रुपमा यसले नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ । विस्थापितहरू लकडाउनको कारण घरभित्रै बस्न बाध्य छन्, जीविकोपार्जनको लागि आयआर्जन गर्ने काम पनि यतिबेला रोकिएको छ ।
रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ खाल्टे बगरमा, बोगटीटारमा, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नं. ६ धुन्चेमा विस्थापित शिविर छ । यस्तै, नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिका वडा नं. ५ शान्तिबजार, विदूर नगरपालिकाको पिपलटारको इनारपाटीमा विस्थापितहरू अस्थायी टहरो (क्याम्प) मा बसोबास गरिरहेका छन् । यी क्याम्पहरूमा करिव ४०० परिवार अहिले पनि विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन् ।
२०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पको कारण आफ्नो साविक बासथलोमा पहिरो गएको वा सम्भावित जोखिमको कारण बस्न नमिल्ने भएपछि कतिपय विस्थापित सुरक्षित घडेरीमा स्थानान्तरण भएका छन् भने कतिपय अझै बाँकी विस्थापित बस्तीमै छन् । रसुवा जिल्लामा भूकम्पको कारण १०५८ परिवार विस्थापित भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म ६६८ परिवार स्थानान्तरणको लागि जग्गा खरिद गरी पुनर्वासको प्रक्रियामा छन् भने बाँकी अझै पनि कतै न कतै विस्थापित रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
खाल्टे, बोगटीटार, धुन्चे, शान्ति बजार, इनारपाटी लगाएतको ठाउँका क्याम्पहरूमा ४०० विस्थापित परिवार बसोबास गरिरहेको जानकारी त्यहाँका अगुवाहरूले दिएका छन् । उनीहरू अहिलेको अवस्थामा विस्थापित बस्तीमै रहेको टहरामा बसोबास गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने प्रयासमा छन् ।
विस्थापित बस्तीका अगुवाहरूसँग गरिएको कुराकानीअनुसार बस्तीमा अहिले खाद्यन्न लगायत अन्य समस्याहरू पनि थपिएका छन् । मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएको कारण आम्दानी रोकीएको छ । तर कतिपय विस्थापित बस्तीका मानिसहरू भने गाउँघर फर्किएर खेतीपातीमा पनि जुटेका छन् । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका वडा नं. २ सानो हाकुमा ५० देखि ५५ घरका मानिसहरू फर्किएर खेतीपातीमा जुटेका स्थानीय अगुवा सोमबहादुर तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले त्यहाँ मुसुरो बाली सङ्कलन गर्ने, कुट्ने, मकै र आलु गोड्ने समय भएको छ । परिवारका सदस्य र छिमेकीहरूको समेत सहयोग लिई कृषि कार्य भइरहेको छ ।
यस्तै, खाल्टेमा बसोबास गर्ने २१० घरधुरी विस्थापित मध्ये अहिले आधा जस्तो मानिसहरू खेतीपातीको लागि गाउँघरमा फर्किएका छन् । उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. १ वडा सदस्य तथा विस्थापित अगुवा पूर्णबहादुर घलेकाअनुसार पुरानो गाउँ गोगनेमा यस वर्षदेखि मानिसहरूले थोरै थोरै मात्रामा मकै रोप्ने काम सुरुवात गरेका छन् । मकै गोडेमल गर्ने समय भएको हुँदा हिजोआज मानिसहरू गाउँघर फर्र्किएका छन् । बाँकी मानिसहरू अहिले टहरोमै छन् । उनीहरूको अहिलेसम्म पनि पुनर्वास हुन सकेको छैन । उनीहरू घर फर्कन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । खाल्टेमा बसोबास गर्ने अधिकाशं भूकम्प पीडित विस्थापितको साविक बस्ती हाकुको गोगन खण्डहर जस्तै छ । पुरानो भत्किएको बस्ती जस्ताको त्यस्तै छ । उनीहरू ५ वर्षदेखि पुनर्वासको पर्खाइमा छन् ।
अहिले यहाँका मानिसहरूको आय आर्जनको काम रोकीएको छ । बजार नजिकै ज्यालादारी गर्ने, सडक तथा हाइड्रोपावरमा श्रम गर्ने कामहरू पनि रोकिएको छ । बालबालिका, महिलाहरू सबै घरभित्रै छन् । कतिपयले भने वरपरको गाउँलेसँग समन्वय गरी खेती अधिँया लिई खेतीपाती गर्न पनि थालेका छन् । यो समयमा मकै रोप्ने काम भएको छ ।
बोगटीटारमा बसोबास गर्ने भूकम्प पीडित विस्थापितको समस्या पनि उस्तै छ । उनीहरूले डेढ वर्ष पहिले नै जग्गा खरिद गरेको भएपनि पुनर्वास सुरुवात नभएको कारण अस्थायी टहरोमै बस्न बाध्य छन् । उनीहरू एकीकृत बस्तीमार्फत पुनर्वासमा जाने योजनामा थिए तर हालसम्म पनि एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभएको हुँदा उनीहरू बसोबास गरेकै अस्थायी क्याम्पमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । यी क्षेत्रका भूकम्प पीडित विस्थापितहरू पुनर्वासको पर्खाइमा छन् ।
लकडाउनको मारमा परेका विस्थापित परिवारलाई उत्तरगया गाउँपालिकाको समन्वयमा केही हाइड्रोपावर कम्पनी र सघं संस्थाको सहयोगमा राहत स्वरुप प्रति घरधुरी १ बोरा चामल वितरण गरिएको थियो । राहतको रुपमा चामल मात्र वितरण गरिएको र अन्य सामग्री सहयोग नआएको हुँदा सामान्य जीवनयापन पनि सहज नभएको विस्थापित बस्तीका अगुवाहरू बताउँछन् । बस्तीमा रहेका कतिपय जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा घाइते भएका परिवार, एकल महिला अविभावक भएको परिवारमा खाद्यन्न लगायतको समस्या अझ बढी परेको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले यसरी विस्थापित भई आफ्नो साविक बस्तीमा नबसेका, नियमित आम्दानीको स्रोत नभएकाहरुकोलागि ज्यालामजदूरीको काम समेत रोकिएको यो समयमा विशेष राहतको प्योकज बनाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बस्तीमा रहेका बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राहत स्वरुप सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रकशित मिति :बुधबार, अप्रिल २९,२०२०
Tag: #COVID-19, #Rasuwa, Strategic Priority 2
एक स्वबन्दीको डायरी
लकडाउनको सदूपयोग र कृषिको काम
लकडाउन अनुभूति : गाउँमा सुरक्षित छौं
सामुदायिक भूमि अधिकार अभियान
भूमि कृषि अभियान
दिगो समाधान, दोस्रो चरण
सिमान्तकृत किसान परिवारको मर्यादित जीवनका लागि आर्थिक र समाजिक अधिकारको सुदृढिकरण (इएस.माफार)
भू–उपयोग र जीविकोपार्जन कार्यक्रम, एफ.डि.एफ
राष्ट्रिय सङ्लग्नता रणनीति
उद्देश्य अनुरुप भूमि व्यवस्थापन रणनीति (एफएफपिएलए)
यसरी फेर्न सक्छ कृषिले काँचुली
बेलका नगरपालिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना